Ukuvalwa kwezwe kumnike ithuba lokubhala izingoma - Ilanga News
Home Izindaba Ukuvalwa kwezwe kumnike ithuba lokubhala izingoma
Ukuvalwa kwezwe kumnike ithuba lokubhala izingoma
USjava uthi usesungule inhlangano engenzi inzuzo
UKUVALWA kwezwe yize bekuletha indlala kubaculi abaningi, uSjava uthi kumnike isikhathi sokukhiqiza amanoni amasha. Uphinde wasungula nenhlangano yokusiza abantu.
UBONGA uthando alukhonjiswa ngabantu base-Thekwini, kubalwa namaciko akhona, umculi waseBergville, uJabulani “Sjava” Hadebe, othi kukho konke akwenzayo, uyazi ukuthi kunabantu abahlale bezimisele ngokumeseka.
NgoMgqibelo lo mculi ubese-Yadini Lounge, eMlazi enza adume ngazo, ejabulisa abantu, okuyinto agcina ukuyenza ezinyangeni eziwu-6 ezedlule.
Uthi ukuba sesiteji kumvuselele kakhulu. Eyadini ubengomunye wabaculi abanandise emcimbini wokugubha iminyaka ewu-7 le ndawo kaJabulani “Mjay” Nzama yasungulwa.
USjava wagcina ukunandisa emcimbini wakhe, i-A Night With Sjava, owawuseDurban International Convention Centre, mhla ka-29 kuNhlolanja (February) lapho abantu babengangezimpethu zendlovu.
Njengamanye amaciko, lo mculi ubevinjwe wukuvalwa kwezwe ngenxa yokubheduka kweCoronavirus ukujabulisa abalandeli bakhe esiteji.
Yize lesi sikhathi sokuvalwa kwezwe sibe nomthelela omubi kwabaningi, uSjava uthi simsizile ezintweni eziningi obekudingeka ukuba agxile kuzona njengokuthola isikhathi sokuzithola yena uqobo nokwenza umsebenzi omningi ngaphandle kokuba aphazamiseke.
“Umculo yinto engiyithanda ngendlela eyisimanga. Ukuvalwa kwezwe kungenze ngaba nesikhathi sokugxila kuwona, ngenza izinto eziningi abalandeli bami abazozwa ngazo maduze nje,” esho.
Phakathi kwezinto athi uthole ithuba lokuzenza, wukusungula inhlangano engenzi inzuzo, iSjava Foundation, athi ubesenesikhathi eside efisa ukuyisungula kodwa isikhathi engasitholi.
“Noma le nhlangano ngiyisungule manje, kodwa kunesikhathi ngaqala ukwenza imisebenzi yokubuyisela emiphakathini njengoba bengike ngenzele izingane izindawo zokuqophela (umculo) nokunye okuningi,” kusho yena.
Uthi inhloso enkulu yale nhlangano wukugqugquzela nokufundisa intsha yasezindaweni zasemakhaya ukuthi kayikho into efisa ukuyenza engeke ikwazi ukuyenza.
“Ngiyaye ngizibuke mina nje nalapho ngizalwa khona, ngingakholwa ukuthi ngakwazi ukuhamba ngize ngifike lapho ngikhona manje.
“Njengomuntu okhulele emakhaya, ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma sisakhula, siyaba nokuzenyeza nokubukela ezinye izinto kude nathi ngoba sizitshela ukuthi zifanele abantu abathile.
“Inhloso yami wukuvuselela ukuzethemba ezinganeni zasemakhaya, zazi ukuthi zingafinyelela noma yikuphi lapho zifisa khona,” kusho yena.
Ubonge kuMjay ngokumeseka kakhulu kusukela engena emculweni eminyakeni ewu-5 edlule.
“UJabulani ungomunye wabantu abakholelwa kakhulu kimina futhi abangesabi ukunginika ithuba. Ngiyabonga kakhulu nakuyena futhi ngifisa aphumelele aye phambili,” kusho uSjava.
Eyadini uSjava ubeshiyelana inkundla nabaculi abahlukene okubalwa kubona uBabes Wodumo, uDladla Mshunqisi, uTipcee, uSlenda The Dancing DJ, noDJ Happygal.
Previous articleUyabalisa unina kaswenka obulewe
Next articleI-PSL ishiywe ngabaxhasi bakwaTelkom